Diaspora iyi, Sare nemukadzi walandlord ivo vaenda UK – Vanoda Zvinhu
Ma long distance relationships ave common especially for ma Zimbo becoz of the economic situation. Ndakasara ndichigara paimba pa landlord vangu ivo vaenda Ku diaspora. Mukadzi wavo ndaimuti sissy sezvo mai vemukadzi uyu vaiva same totem na moms vangu.
Ndakaitira izvi kuti pasaita pfungwa dzeku chonyana sezvo ini i am a home person handiendi out maningi, Saka landlord vaindi respecta ini ndichi va respectavo zvakadaro. Pakapera 1 week landlord vangu vaenda ku diaspora, Mukadzi wavo wandaiti sissy akatanga kuchinja maitiro towards me. Ndakatanga nekunzi ndiperekedzeiwo ku morning jog, becoz ndoda kuti panodzoka fathers vawane ndiri kamusikana chaiko kari fit. Ndakataita izvi kwe mazuva maviri, rechitatu tabva kunomhanya iri saturday mangwanani zvikanzi ndibatsirewo kuita a few stretch exercises musitting room.
Mukadzi akarara nemanhede zvikanzi ndibate kutsoka ndiite ma sit
ups. Paakanorara pasi ndakabva ndaona shape ye hukadzi hwake hwese. Amai vane oval shape yavo iri smooth, apa vange vakapfeka tracksuit ne G- string. ndakaona beche rakazvimba mu track suit hana yangu ikarova. Ndakazvibata semunhu aiinzi
hanzvadzi. Vakaita ma sit ups avo ndokupedza ini moyo wange wava pa chunhu chakazvimbisa tracksuit ya amai ava.
Ndakazonzwa zvave kunzi Dickson i trust you, can i tell you something ndikati taurai zvikanzi ” I miss my husband zvisingamboiti. pane zvaanondiita everyday zvinotoda his presencelike now. Ini ndikati haa kana zvirizvandinogona kuita i am available for you sissy. Ivo ndokuti you are such a darling, Ndakaita suspicious but i just said to myself ndoona kunoperera nyaya. Ndakati regai ndinogeza kwangu ku cottage zvikanzi if you
dont mind you can bath kuno kune hot water, sekuti yaiva winter ndakati zvaita handicha need kuboiler mvura,
Ndakanotora my towel ndokupinda mu bathroommuya. Ndakati ndave kunakirwa ne warm water ndikanzwa door ravhurwa gently, kuvhura maziso wonei ndi amai landlady vangu apa haana kana chinhu, Paakangondibata kana rurimi rwakatadza
kubudisa shoko rimwe zvaro, Ndakanzi uyo muromo ndikagotsvoda amai ava zvekuomesa mate mukanwa. Havana kunonoka vabva vati ruoko rwavo kuzi python rangu rikago viruka ne hasha.
Vakagoritora ndokuri nagisa pakati pemakumbo avo apo pange pava kuyerera masiriri ebeche. Varume ini nhengo ndakapihwa zveshuwa handitodi zvekusangana ne ma virgin vangaiswa ma stich. Mukadzi mukuru akambomira kufema pandaka pinda, Akazoti aita adjust to my size akagotanga kuchema aaaaaah ndakaona iri mutrouser kuti ihombe, AAAAh chihera imi mboro ihombe iyi, ndabvuma zvangu,,,,,, fuck me harder usandityire tell me how you want it, I began to thrust faster zvikanzi pliz dont cum yet, Akabva abata toilet seat apa akandi nikira zibeche rino mutumba vasekuru,
Handina kunyadzisa, ndakaiti pfee amai vakaita cry like funeral ini ndichi pomba chete. Ndakanzwa beche rake rava kuita macontractions ndikanzwa cum juice yake ya flooda beche rake ndakabva ndango regerera my male juice into her and she welcomed it with a mourn of satisfaction that made me feel like i had given her a million US dollars.
She gave me kiss and said thank you, you are a life saver. Amai ava ndiri kukwira kunge ndine mboro yekukwereta. Murume wavo anofona often pamwe tisina hembe tiri pakati pe bonde. Akatuma mari ye emergency passport tikaidya ka viri kese.
Ndakazongoona kuti ndanyanya ndikazoti atore passport kana aenda kukano mubhowa anodzoka ndomupa yangu yaanorwarira. My question is it was just 1 week and 3 days after daddy vaenda. Be honest guys can you really keep it for him or her,
DISCIPLINARY HEARING YAVIRGINIA by Sir Mborock
Next story Dhuma Dhuma nebeche ndakutopinda mudhorobha
Previous story Mutambo wevanhu vakuru: Zvinonaka